Sidee Si Raadin U Isticmaalayaasha Fiican ee Booqanaya Website-ka - Khabiirka Cirka
Xogta ugu dhow dhowaanta taraafikada shabakadda ayaa ah hawlgal ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga nidaamka kombiyuutarka iyo bixinta tirakoobka dhabta ah. Soo-booqdayaasha Codsiyada Webka waxay u kici karaan jaangooyooyinka iyo sharafyada aan la saadaalin Karin. Tani waxay u sabab noqon kartaa spam iyo gudbinta galmada bogga internetka ee la xariira habka kombiyuutarka oo leh nacas, fayras, iyo Trojan - como escolher o oculus de sol masculino femenino.
Qayb ka mid ah nacfiyada iyo feylalka, spam taraafikada taraafikada waxay diiwaangelisaa xogta been abuurka ah ee Google Analytics iyagoo rajo-darro ku qaba milkiilaha goobta. Marka la eego si loo helo macluumaadka saxda ah ee Google Analytics, waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu dabaqi karo taraafikada ka socota Adeegga Korjoogteynta Bogga - Site24x7
Maqaalkaan, Nik Chaykovskiy, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Sare, wuxuu bixiyaa siyaabo sahlan oo loo xakamayn karo tallaabada taraafikada talaabo talaabo:
First of all, ka reebo gaadiidka iyada oo isticmaalaya Site24x7 version browser gaar ah oo lagu abuuray Google Analytics this habka loo isticmaalo in lagu kala saaro gaadiidka ka soo codsiga shabakada Site24x7 (Real Browser) adoo dejinaya qalabka filtarka Google Analytics. Maqalku waa ka qarsoon tahay muujinta Google Analytics View iyo sidaas darteed wuxuu bixiyaa hab aad u fiican oo ka reeban taraafikada adeegyada adeegsashada bogagga shabakadaha ee laga yaabo in ay qaadsiin karaan nacas, fayras iyo tirakoobka taraafikada nidaamka..
Si ka duwan noocyada kale ee daalacashada internetka, Firefox wuxuu leeyahay nooc gaar ah oo ka mid ah kormeeraha barnaamijka Webka (Real Browser) oo leh muuqaal yar oo yaryar, (dot) 247, oo awood u leh inuu ku ciyaaro macaamilo diiwaangashan. Iyadoo la eegayo booqashada website-ka iyada oo la adeegsanayo Google Analytics, qunsulku waa la isku-hagaajin karaa si looga fogaado waxqabadyada barnaamijka yar-yar ee 247 si loo hubiyo xogta saxda ah inay ka tarjumeyso Google Analytics markaad joojinayso qalabka Trojan iyo nacaybka.
Talaabooyinka lagu xakameynayo Google Analytics-yada si looga reebo Site24x7
Ku qor koontada Google Analytics oo aad u dooratid ikhtiyaarka maamulka. Under Admin, dooro Filters ka dibna ku dar Filters.
On menu, dooro Robot Traffic Site24x7 sida Magaca Fudud
Xakamee sifo gaar ah oo hoos yimaada Nooca Fiilada.
On Field Filter, dooro Browser Version.
Ugu dambeyntii, dooro 24x7 sida Shaxanka Muuqaalka.
Kadib bixinta faahfaahinta loo baahan yahay, riix Codsiga dhammaan Views si loo keydiyo isbeddelada ka takhalusaya waxqabadka spam ee sawirada nacfiyada, fayrasyada iyo taraafikada diiwaangelinta xun ee Google. Marka laga reebo Site24x7 adoo xiraya Block Domain waa ikhtiyaarka u qaabeynaya magacyada domainka si loo iloobo ama u oggolaado fulinta site24x7. Aagga Bloc wuxuu xaqiijiyaa in kartida Site24x7 ay codsan karto in la ilaaliyo bogagga shabakadaha ma guuleysan.
Tallaabooyinka lagu furfurayo Domain Block
Galitaanka ikhtiyaarka dalabka ee Webka oo ka hooseeya Webka Real Browser.
Dooro Mashruuca Macluumaadka Webka oo la qaabeeyey oo la doortay
Hagaajinta Edit menu iyo dooro Block Domains iyo quudinta Google Analytics sida magaca domain.
Gudbi si aad u badbaadisid isbedelada. Raac falanqaynta doodaha ama kaala tasho wixii su'aalo ah ee ku saabsan xayiridda taraafikada ee Site24x7 Websaydhyada Websaydhka si ay uga badbaado nabadgelyo nacfiyada, fayraska, taraamka iyo taraafikada.